အဆိုပါအများစုမှာရှုခင်းသာရထားနွေရာသီမှာတော့ဆွစ်ဇာလန်ခုနှစ်တွင် Trips | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဆိုပါအများစုမှာရှုခင်းသာရထားနွေရာသီမှာတော့ဆွစ်ဇာလန်ခုနှစ်တွင် Trips
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ
ဒါဟာဆွစ်ဇာလန်အများဆုံးက၎င်း၏များအတွက်လူသိများကြောင်းဆိုပါတယ်နိုင် နှင်းဖုံးထိပ် နှင့်အရသာချောကလက်, ဒါပေမယ့်မျက်စိနှင့်တွေ့ဆုံထက်အဆင်းလှသောအစ်မတိုင်းပြည်အတွက်ဤမျှလောက်ပိုပြီးလည်းမရှိ. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမီးရထားခရီးများထွက်ခြင်းဟာပျော်မွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း လှပသောကျေးလက်. သင့်ရဲ့အချိန်အများစုကိုရှိကုန် Make. အဆိုပါ ပူနွေးသောရာသီဥတု သင့်ရဲ့စေသည် ခရီးသွားခြင်း ပို. ပင်ပျော်စရာ. ဤရွေ့ကားအတွင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအရှိဆုံးသာယာလှပရထားခရီးများထွက်တချို့ရှိနေပါတယ် နွေရာသီ.
စိန့်တို့အကြားအဆိုပါ Glacier Express ကို. Moritz နှင့် Zermatt ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့မီးရထားခရီးများထွက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်
ဒါကဖြစ်ကောင်းဆွစ်သာယာလှပရထားရဲ့အကောင်းဆုံးလူသိများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ. ရထား ခရီးသွားမှတ်တမ်း စိန့်အကြား. Chur မှတဆင့် Moritz နှင့် Zermatt, Andermatt, နှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်. ဒါဟာအပြည့်အဝနေ့ကမီးရထားခရီးစဉ်ရဲ့ဒါပေမယ့်လူအတော်များများကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုကျော်ထိုသို့ပြုမှရွေးချယ်. သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောမှာအချို့သောအချိန်ဖြုန်း ခရီးစဉ် လမ်းတစ်လျှောက်. နွေရာသီသွားကြဖို့လူကြိုက်အများဆုံးအကြိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အလေးအထိရှိပါတယ် တစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ် ဒီကာလအတွင်း. အများဆုံး သာယာလှပတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဒီ ရထားခရီးစဉ် Chur နှင့်စိန့်အကြားရှိအပိုင်းဖြစ်ပါသည်. Moritz. ဤတွင်သင်မကြာခဏ-ရိုက်ကူးကျော်ခရီးသွားလာပါလိမ့်မယ် Landwasser viaduct တစ်ဦးအတွက်အဆုံးသတ် ပြွန်ခေါင်းလမ်း.
ဇူးရစ်စိန့် Moritz မှရထား
Zermatt စိန့် Moritz မှရထား
စိန့် Moritz ရထားမှလိုင်ယွန်
စိန့် Moritz ရထားမှဘေဆယ်
ဂျီနီဗာမှအဆိုပါ Golden Pass ကိုလိုင်း
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှမရှိပါရထားခရီးများထွက်သည့်အပေါ်တစ်ဦးစီးနင်းခြင်းမရှိဘဲပြည့်စုံပါလိမ့်မယ် ရွှေ Pass ကိုလိုင်း. ရထားဂျီနီဗာမှသို့မဟုတ်ရေကန် Lucerne ကနေဝင် ဇူးရစ် မိမိတို့လက်ကိုအပေါ်အောက်သာအချိန်ရှိသည်သောသူတို့အဘို့ဂျီနီဗာမှ. တစ်ခုချင်းစီကိုခရီးတဘက်ကဲ့သို့နည်းတူအံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ်. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ရှစ်၏အမြင်များရှိပါတယ် ခမ်းနားအပြာရောင်ရေကန်များ, သုံးတောငျကို 'passes ကျော်နှစ်ယောက်ဘာသာစကားဒေသများအကြား (ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမန်စကားပြောဆွစ်ဇာလန်). မြေတပြင်လုံးခရီးစဉ်ယူပြီးလိုအပ်ပါတယ် ရထား switching အကြိမ်ပေါင်းများစွာပေမယ်မြင်ကွင်းများကကောင်းစွာတန်ဖိုးရှိများမှာ. ခရီးသည်ရန်လိုအပ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံကြိုတင်ယူထား အဆိုပါရထားအချို့ပေါ်နှင့် ကားများ. ရန်သေချာစေပါ ရှေ့ဆက်စီစဉ် ဒီခရီးစဉ်များအတွက်!
ဥရောပ Jungfraujoch ထိပ်တန်း
ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Summertime ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသူတို့အားကျော်ကြားအဖြူထိပ်ကြည့်ဖို့ခညျြနှောငျနှင်းဖုံးတောင်များသင် Jungfraujoch ဘူတာရုံသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်ထက်ချင်ဘာတွေလုပ်နေလဲလျှင်နေကြတယ်. ဒါဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဥရောပတိုက်တွင်ဘူတာရုံ နှင့် Kleine Scheidegg ကနေရထားဖမ်းခြင်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့မီးရထားခရီးစဉ်များအနေဖြင့်အမြင်များအထူးတစ်ခုခုဖြစ်ကြပြီးအဲဒီမှာရရန်ခရီးမဟာဇာတျသိမျးဖို့ပြီးပြည့်စုံသော build-တက်ဖြစ်. ဒီခရီးစဉ်ကျိန်းသေစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အဲဒီမှာယူဖို့အများကြီးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရထားခရီးစဉ်များဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်ဒီလာမည့်နွေရာသီအတွက်ဆွစ်ဇာလန်မှာထိပ်တန်းအများဆုံးသာယာလှပရထားခရီးများအကြားရှိပါတယ်. အဘယျသို့ပိုကောင်းလမ်း နေရောင်ခြည်ကိုခံစား နှင့်ရထားထက်ဤလှပသောနိုငျငံ၏အံ့ဘွယ်သောအမှုအတွက်ယူ? ကျနော်တို့ဒါဆွစ်ဇာလန်ကြည့်ဖို့ပိုပြီးပြီးပြည့်စုံသောလမ်းစဉ်းစားလို့မရဘူး အချို့ပိုက်ဆံကယ်တင် နှင့်ရထားခရီးသွား.
ဥရောပခရီးသွားဘို့အတွက်မီးရထားလက်မှတ် booking? အဘယ်ကြောင့်မယူ3သင့်ရဲ့ရထားခရီးစဉ်များအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရထားခရီးစဉ်ကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မိနစ်. ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှ Login စာအုပ်လက်မှတ်တွေလေ့.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-most-scenic-train-trips-in-switzerland-in-summer%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / fr ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
SwissAlps ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် travelswitzerland
ငါရှေ့ကွေး၏နေဖို့ရန်ကြိုးစား, ငါဆွဲဆောင်မှုစိတ်ကူးများနှင့်ပုံပြင်များပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့် drive ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်. ငါကယနေ့ရေးထားမညျဘယျအရာပေါ်တိုင်းနံနက်များနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနှိုးလို. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
5 အမ်စတာဒမ်အားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ထိပ်တန်း 10 ကမ္ဘာ့လျှို့ဝှက်နေရာများ
မူပိုင်ခွင့်© 2021 - တစ်ဦးကရထား Save, အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်